Mytel, MBAPF to Provide Digital Literacy Training to 14 Universities | Myanmar Business Today
Home IT & Telecom Mytel, MBAPF to Provide Digital Literacy Training to 14 Universities
Telecom operator Mytel is partnering with Myanmar Book Aid and Preservation Foundation (MBAPF) to organize digital and information literacy training for students and faculty from 14 universities across the country.
The two partners signedamemorandum of understanding November 27 at Park Royal Hotel, Naypyidaw.
According to the MoU, Mytel will help conduct digital literacy training through Beyond Access Myanmar Libraries, government departments, NGOs, universities and other educational institutions. The training drive is part of the University of Washington’s Information Strategies for Societies in Transition Program, which has already benefited some 8,000 participants in Myanmar.
Training of 49,525 students from 14 universities will take place underacooperation agreement between MBAPF and the Ministry of Education, with two sessions per month from December 2019 to July 2020.
“I believe our children will be the future leaders of Myanmar and education playsavery important role in their lives,” said U Zaw Min Oo, Mytel’s chief external relations officer. “Hence, we have cooperated with MBAPF to fulfil all our corporate social responsibility commitments to improve the digital assessments in higher education and in universities,”
The program aims to train Myanmar’s university students and lecturers to be able to integrate the essential tools and processes of information and communications technology into daily classroom activities and university-related businesses. This will improve the digital ecosystem of universities and serve asastepping stone towards transforming Myanmar intoadigital country.
At each training session, 30 lecturers from participating universities will be trained by MBAPF. The 14 universities include the University of East Yangon, University of Medicine 1, Pyay University, Pyay Technological University, Technological University (Maubin), Technological University (Hinthada), Pathein University, Technological University (Pathein), Bago University, Government Technical College (Mohnyin), Technological University (Hpa-An), Government Technical College (Myingyan), Technological University (Sagaing), and Government Technical Institute (Chauk).
Mytel နှင့် MBAPF တို့ ပူးပေါင်း၍ တက္ကသိုလ် ၁၄ ခုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတတ်မြောက်မှု ပရိုဂရမ်များပြုလုပ်ရန် နားလည်မှု လက်မှတ်ရေးထိုး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် Mytel နှင့် မြန်မာစာပေပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ပရဟိတ အဖွဲ့ (MBAPF) နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ၁၄ ခုမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူပေါင်း ၄၉၅၂၅ ယောက်ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ တတ်မြောက်မှု ပရိုဂရမ်များပြုလုပ်ပေးရန် နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့တွင် ရေးထိုးခဲ့သည်။
နားလည်မှု စာချွန်လွှာအရ Mytel သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ တတ်မြောက်မှု ပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်တွင် အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများကို သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ Mytel က အခုလို MBAPF နှင့်ပူးပေါင်းပြီး တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတွေနဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း တစ်ရပ်အနေနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Mytel ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဇော်မင်းဦးက ပြောသည်။
မြန်မာကျောင်းသားများနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ/ဆရာမများ အားလုံးကို နေ့စဉ်သင်ခန်းစာများနှင့် တက္ကသိုလ်နှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ICT ၏မရှိမဖြစ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂေဟစနစ်ကို အကျိုးပြုစေနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ခြေလှမ်းတစ်အခုအဖြစ် စတင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သင်တန်းတွင် ICT နှင့် Cloud Computing အားမိတ်ဆက်ခြင်းများ၊ Cloud Storages၊ Online လုံခြုံရေးမှုနှင့် ဝေဖန်တွေးခေါ်မှုများ၊ Google စာသင်ခန်းများ၊ Youtube သင်ခန်းစာများ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ခုစီတိုင်းကို ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ ဆေးတက်ကသိုလ်(၁)၊ ပြည်တက္ကသိုလ်၊ ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နညျးပညာတက်ကသိုလ်(မအူပင်)၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ဟင်္သာတ)၊ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်)၊ ပဲခူးတက္ကသိုလ်၊ အစိုးရ နည်းပညာကောလိပ် (မိုးညှင်း)၊ နညျးပညာတက်ကသိုလ် (ဘားအံ)၊ အစိုးရ နည်းပညာကောလိပ် (မြင်းခြံ)၊ နည်းပညာတက်ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ချောက်) စသည့်တက္ကသိုလ်များမှ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ/ဆရာမ အယောက် ၃၀ အား ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအထိ တစ်လလျှင် သင်ခန်းစာနှစ်ခုနှုန်းဖြင့် ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Ei Thandar Tun
Previous articleVolvo Opens Showroom in Mandalay
Next articleGGI Insurance Ready for Action